१४१ दिनपछि शनिको चाल परिवर्तन, साढेसातीलाई राहत, यी राशिको भाग्य चम्किने - Everest Dainik - News from Nepal
एभरेष्ट डेस्क: ज्योतिषशास्त्रमा शनि ग्रहको विशेष महत्व छ । राशिमा शनिको उपस्थितिले राम्रो र नराम्रो दुबै फल दिने गर्दछ भनेर विश्वास गरिएको छ ।
आजका दिनदेखि शनिले आफ्नो चाल परिवर्तन गर्दैछन् । आजदेखि उनी बक्रीबाट सिधामार्गी हुनेछन् । मार्गी हुँदा शनिको साढेसाती, अढैया र शनिबाट पीडित व्यक्तिहरुले राहत पाउने छन् ।
१४१ दिनपछि आज दिउँसो दुई बजेर ३३ मिनेटमा शनि सिधा बाटोमा हिँडनेछन् । शनि आगामी २४ जनवरी २०२० सम्म यसरी नै मार्गी रहनेछन् ।
ध्रमग्रन्थमा शनिलाई क्रूरका साथै न्यायको देवता मानिन्छ । शनिदेवले मनुष्यको कर्मका आधारमा उसलाई फल प्रदान गर्दछन् । अहिले शनि धनु राशिमा गोचर गरिहेका छन् तर आजदेदि उनी धनु राशिमा नै बक्रिबाट मार्गी हुनेछन् । यसपछि उनी मकर राशीमा प्रवेश गर्नेछन् । धनु राशिको स्वामि भने गुरु बृहष्पति हुन । धनु राशिमा शनिसँगै केतु पनि रहनेछन् ।
याे पनि पढ्नुस आज आइतबार, कस्तो छ तपाइको भाग्य? पढौं राशिफल
शनि मकर र कुम्भ राशिका स्वामि हुन भने तुला राशिमा उच्च र मेष राशिमा नीच हुने गर्दछन् ।
शनिको यो चाल परिवर्तनले के फाइदा होला त ?
शनि तपाईको राशिको नवौं भावमा मार्गी भइरहेका छन् । यसबाट मेष राशिलाई विशेष आर्थिक लाभ हुनेछ ।
यो राशिको जातकका लागि शनि आठौं भावमा मार्गी हुनेछन् । यो अवस्थाले कष्टहरुबाट छुटकारा पाइनेछ ।
यो राशिका जातकको सातौ भावमा शनि मार्गी हुने भएकोले सहयोगीसँको सम्बन्ध राम्रो रहनेछन् ।
शनि छैठौं भावमा मार्गी हुने हुँदा कोर्ट कचहरीमा लाभ पाइनेछ । विदेश जाने योग बन्ने छ ।
शनि पाँचौ भागमा मार्गी हुने हुँदा सन्तान सुख पाइनेछ । जागिर परिवर्तन हुने योग बन्न सक्छ ।
शनि चौथो भावमा मार्गी हुँदा भूमि, भवन, बाहन मिल्ने योग बन्ने छ ।
शनि तेश्रो भावमा मार्गी हुँदा साहसमा बृद्धि र यात्राको योग बन्ने छ ।
वृश्चिक राशिका जातकमा साढेसातीको प्रभाव छ । यो राशीमा शनि दोश्रो भावमा रहने छन् । यसबाट पैत्रिक सम्पत्तिमा लाभ हुने छ ।
धनु राशिका जातकमा पनि साढे सातीको प्रभावि छ । शनिदेव धनु राशिका जातकको लग्नमा रहने छन् जसबाट स्वास्थ्य लाभ राम्रो रहनेछ ।
शनि १२ औं भावमा मार्गी रहनेछन् । मकर राशिका जातकमा पनि साढे सातीको प्रभाव छ । विदेश जाने योग बन्न सक्छ ।
शनि ११ औं भावमा हुँदा लाभको योगका साथै नयाँ अवसर पाइनेछन् ।
शनि या राशिको १० औं भावमा रहनेछन् । जसबाट कार्यक्षेत्रमा ख्याती पाइन सक्छ ।
ट्याग्स: राशिफल, शनि ग्रह, शनिको यो चाल परिवर्तन, साढेसाती